ARỤ NA ỊKPỤ ARỤ N’ALA IGBO II | Igboniile
ARỤ NA ỊKPỤ ARỤ N’ALA IGBO II
Sun, 04/24/2016 - 17:16 | Site Manager
Ịkpụ arụ bụ emume ọbụla a na-eme oge ọbụla e merụrụ ala, ka obi mmụọ maọbụ ala e merụrụ were dajụọ, ghara ịdịzị ọkụ maọbụ ịdịzi oke ọkụ n’ebe ọbọdọ na onye mere arụ nọ. Ọ bụ site n’ịkpụ arụ ka e ji agbalahụ uke, ọdachị maọbụ ahụhụ obodo maọbụ ndị mere arụ gaara izute.
Ọ bụghị onye ọbụla n’ala Igbo nwere ikike ịkpụ arụ. Ọ bụghịkwa ọnọdụ edemede a ikwu etu e si akpụ arụ ugbua na ebe a. mana otu ihe dị mkpa bụ na ọ bụrụ nnukwu arụ, a na-akpọ ndị eze mmụọ ikike ịkpụ arụ dị n’aka ka ha bịa kpụọ ya bụ arụ, mana ọ bụrụ obere arụ, n’ọtụtụ obodo, ọ bụ eze na-achị obodo ka ọ dịịrị ịkpụ ya bụ arụ. Kaosiladị, ọ dị mkpa ịmata na ọ bụ ndị Agụkwu-Nri na-akpụ arụ. Ndị ọ bụkarị ha na-akpụ ya bụ arụ bụ ndị akakpọ.
E nwere ọtụtụ ihe ndị e ji akpụ arụ dịka ewu, ehi, ebulu, ọkụkọ, ọjị, ji, dgz. Mana ihe ọbụla a ga-eji kpụ arụ na-esi ka arụ e mere si dị. Ọ dịkwa mkpa ime ka a mata na ọ bụ eze mmụọ na-ekwu ihe ndị a chọrọ a ga-eji kpụ arụ ọbụla dịka arụ ọbụla si dị niihi na ụdị ụdị na-adị n’ụdị n’ụdị.
TUPU A KPỤỌ ARỤ
Ihe ndị a bụ ihe ndị dị mkpa a ghaghị ime tupu a kpụọ arụ ka arụ a ga-akpụ were dị ire.
1.	Onye maọbụ ndị mere arụ ga-aghọta ma kweta na ha mere arụ
2.	Onye maọbụ ndị ahụ mere arụ ga-ekwe nkwa na ha aghaghị eme ya bụ arụ ọzọ
3.	Ndị a ga-akpụ arụ be ha ga-akpọ ndị akaebe maka ihe merenu, nkwa ha na arụ a ga-akpụ
4.	Onye a ga-akpụrụ arụ ga-eweta ihe afa gwara ya a ga-eji were kpụ arụ o mere
5.	Arụ ahụ a ga-akpụ agaghị abụ ihe nzuzo (niihi na arụ anaghị abụ ihe nzuzo ọtụtụ oge)
Ihe ndị a na-atụ anya ya maka arụ a kpụrụ
Ndị Igbo kwere na e nwere ọtụtụ uru na-adị n’ịkpụ arụ ndị gụnyere:
i.	Ịkpụ arụ na-eme ka onye kpụrụ arụ dị ọcha
ii.	Ịkpụ arụ na-eme ka ahụhụ maọbụ ọdachị gaara ịbịara onye maọbụ ndị ahụ mere arụ kachapụ
Ọghọm ndị Igbo kwere na ha na-esote arụ gụnyere:
i.	Ndị obodo ga na-ewe onye ahụ mere arụ ka ajọ mmadụ
ii.	A ga na-asọ ya asọ
iii.	A na-enwe ihe dịka nzukọ, a gaghị anabata okwu ya
iv.	Agbụrụ ọbụla tote ha ga na-ahụ onye ahụ na ndị agbụrụ ya ka ndị ome arụ
v.	Onye dị etu ahụ anaghị enwe nsọpụrụ n’obodo
vi.	Ndị obodo ndị ọzọ ga-eji maka onye dị etu ahụ na-eleda obodo ya anya